KHABAR QARAAR: Andrea Conti oo markale dhaawacmay! (Baaris hordhac ah) – Gool FM
KHABAR QARAAR: Andrea Conti oo markale dhaawacmay! (Baaris hordhac ah)
(Milano) 27 Maarso 2018 – Andrea Conti ayaa la sheegayaa inuu jilibku wareegey, kaasoo ah isla meeshii qalliinka looga sameeyay bishii Sebtember, balse waaxda caafimaadka Milan ayaa sheegaysa inaysan waxba gaarin carjawda jilibka.
Laacibkan ayaa ku maqnaa dhaawac dhanka jilibka ah oo gaarey horraantii fasalkan, isagoo kaydka soo fariistay ciyaartii Chievo.
Yeelkeede, maanta ayuu markale tababarka ka baxay iyadoo awal cabsi laga qabey inuu muddo dheer maqnaan doono.
Milan ayaase haatan sheegtay in uu kaliya ka murgucday jilibka bidix kaddib markii uu baaritaan ku sameeyay Professor Herbert Schoenhuber, maalmaha soo aaddan baana la qiimayn doonaa qarada dhaawacan.
LA OGAADAY: Barcelona oo ku dhawaatay saxiixa Griezmann waqtigii Enrique (Shaqsiga fashiliyay heshiiska oo la ogaaday)
Hazard oo Diyaar u ah inuu Conte uga ciyaaro Boos kasta xitaa......